ल हेर्नुस, बेकारको खेला ! « Gajureal
ल हेर्नुस, बेकारको खेला !
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:२२
काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा कार मेला सुरु भएको छ । मेलाको आयोजना नाडा अटोले गरेको हो । उक्त मेलाको उद्घाटन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका छन् ।
हिंजो दिउँसै भरि काठमाण्डौका सडकहरु यातायातले खचाखच देखिएका थिए । अहिले चलिरहेका यायायातका साधन र सडकको अवस्था हेर्दा यसलाई ब्यबस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीका लागि टोक्नु न बोक्नु भएको देखिन्छ । प्रदर्शनी भित्र पसे पछिको गजुरियल बिश्लेषण यस्तो छ –
काठमाण्डौ लगायत शहरी इलाकामा बढ्दो सवारी साधनका कारण यात्रा निकै कठिन बन्दै गएको छ । प्रदर्शनीमा राखिएका कारहरु हेर्दा आम नेपालीको खाँचो टार्ने हैन, सिमित ब्यापारिले बाजी मार्ने खालका छन् । महंगा र निकै सुविधा सम्पन्न कार सामान्यले मुल्य तिर्नै नसक्ने, साना मान्छेका घरभित्र छिर्नै नसक्ने खालका छन् ।
बिग हाउसले आकर्शक मेला लाउँछन, ब्यापारीले स्याम्पल किनेर ल्याउँछन् । रंगिचंगी झिलिमिली गाडी सजाउँछन्, वरिपरी बेरा बारा टम्म लाउँछन् । छिर्न मन लागि हाल्छ, उभिएर हेरेपछि, बल्ल छिर्न पाउँने हो दई सय तिरेपछि । मुसुक्क हाँसेर पैसा समाउछन्, गाडी बिक्नै पर्दैन यसैले कमाउछन् ।
सरकारको लागि राजस्व आउँने बाटो, ब्यापारीले कमाउछन त्यसको साटो । पैसा हुनेलाई खर्चिने भाँडो, नहुनेलाई सडक जाम गर्ने ठाँडो । पैसा मुठो भएकालाई कार फेर्ने मेला, मुख मिठ्याउँदै हेर्नेलाई बेकार खेला !
गजुरियल डटकम नेपालको एकमात्र सटायर न्यूज अनलाईन हो । यसमा प्रकाशित सामाग्रीहरु कसैको बानी-ब्यहोरासंग मेल खान गएमा संयोगमात्र हुनेछैन, भुल सुधार गर्ने सुन्दर अवसर पनि मिल्नेछ । ब्यंग्य, आलोचना र सुझावलाई ‘निम्छरो कुण्ठा’ ठानेर खाँबो चिथर्नेहरुलाई श्री पशुपतिनाथले कल्याण गरुन्